အကောင်းဆုံး SK40 Collet Chuck Holder, SK ကို Collet Chuck Holder, Keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck, Intergrated တရုတ်နိုင်ငံတွင် Chuck ထုတ်လုပ်သူ Drilling
Home > ထုတ်ကုန်များ > tool ကိုရှင်SK ကို Tool ကိုရှင် DIN69871
SK ကို Tool ကိုရှင် DIN69871 ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, SK40 Collet Chuck Holder, SK ကို Collet Chuck Holder ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
DIN69871 SK40-ER32-160 အမြင့်မြန်နှုန်း Tool ကိုရှင်
Grooving tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ SK ကိုရှဲလ်အဆုံးစက် Arbore
SK40 tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ CNC ပြောင်းလဲ tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ
SK ကိုမြင့်မားသောအမြန်နှုန်း & Fine မျှမျှတတ tool ကိုရှင်
မြင့်မားသော Precision DAT-ER မြန်နှုန်းမြင့် & ဒဏ်ငွေမျှမျှတတ tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း & Fine ဟန်ချက်ညီ DAT-ER Tool ကို Holder
တွင်ခုံစိတျအပိုငျး SK ကို er tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ
မြင့်မားသော Precision SK ကို / DAT / JT SK50 အဆုံးစက် Arbore
မြင့်မားသော Precision SK50 အဆုံးစက် Arbore
JT / SK ကို / DAT ER အမြင့်မြန်နှုန်း Fine Balance Tool ကိုရှင်
SK ကိုဘက်သော့ခတ်အဆုံးကြိတ် Arbore SLN
CNC ခုံစိတျအပိုငျး SK collets Chuck ကိုင်ဆောင်သူ
SK ကိုမြင့်မားသောအမြန်နှုန်း Fine မျှမျှတတ ER tool ကိုရှင်
JT ER Collet Chuck CNC ခုံ Tool ကို Holder
SK40-FMB22-100 shell ကိုအဆုံးကြိတ် Arbore
SK40-APU13-110L Intergrated keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck
SK40-ER32-100 Collet Chuck ကိုင်ဆောင်သူ ရှေးခယျြများအတွက်မျှမျှတတ G6.3 သို့မဟုတ် G2.5 Precision SK ကို ER Collet Chuck, DIN6499 collet tool ကိုအမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစား၏ကိုင်ဆောင်သူ, မြန်နှုန်းမြင့်နှင့်မြင့်မားသောတိစက် .Mechanical ဗိုင်းလိပ်တံ clamping နှင့် tools များနှင့်အခြား accessories.High Precision SK ကို Shanks...
Grooving tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ SK ကိုရှဲလ်အဆုံးစက် Arbore အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် 1. အမြင့်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်မာကျောမှုကတိထားတော်; 2. Excellent ကချိန်ခွင်လျှာ, 3. အမြင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအား; 4. အမြင့်ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်မှု။ 5. Adapter ကိုစံ: SK ကို DIN69871;6Clamp အကွာအဝေး: 22 - 60 မီလီမီတာ။ လျှောက်လွှာ: ဤသည် SK ကို-FMB စီးရီး...
SK40 tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ CNC ပြောင်းလဲ tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ ကုန်ပစ္စည်းများအားသာချက်များ အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, BT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ TeLi , CAT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ , DAT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ , NT tool...
SK ကိုမြင့်မားသောအမြန်နှုန်း & Fine မျှမျှတတ tool ကိုရှင် ကုန်ပစ္စည်းများအားသာချက်များ အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, BT tool...
မြင့်မားသော Precision DAT-ER မြန်နှုန်းမြင့် & ဒဏ်ငွေမျှမျှတတ tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ DAT-ER မြန်နှုန်းမြင့် & ဒဏ်ငွေမျှမျှတတ tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ DAT30 / DAT40 / DAT50 ER စီးရီး, DIN6499 collet tool ကိုအမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစား၏ကိုင်ဆောင်သူ, မြန်နှုန်းမြင့်နှင့်မြင့်မားသောတိစက် .Mechanical ဗိုင်းလိပ်တံ clamping...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 10.5 / Piece/Pieces
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း & Fine ဟန်ချက်ညီ DAT-ER Tool ကို Holder မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း & Fine ဟန်ချက်ညီ DAT-ER Tool ကို Holder, DAT30 / DAT40 / DAT50 ER စီးရီး, tool ကိုအမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစား၏ကိုင်ဆောင်သူ, မြန်နှုန်းမြင့်နှင့်မြင့်မားသောတိစက် .Mechanical ဗိုင်းလိပ်တံနဲ့ tools တွေကိုဖြတ်တောက်နှင့်အခြား...
တွင်ခုံစိတျအပိုငျး SK ကို er tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ တွင်ခုံစိတျအပိုငျး SK ကို er tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ အထဲက Run: 0.005mm ပစ္စည်း: 40Cr လက်: HRC56-58 Taper စာနာထောက်ထားရေး:...
မြင့်မားသော Precision SK ကို / DAT / JT SK50 အဆုံးစက် Arbore ထိုကဲ့သို့သောမျက်နှာကိုကြိတ်ရှုးအဖြစ် radial drive ကို groove သည်, ဒေါင်လိုက် disc ကိုရှုး, အ set ကို type ကိုအဆုံးကြိတ်အတူရှုးများ၏ Clamp များတွင်အသုံးပြု SK ကို / DAT / JT အဆုံးစက် Arbore, မြန်နှုန်းမြင့်နှင့်မြင့်မားသောတိစက် .Mechanical ဗိုင်းလိပ်တံနဲ့...
မြင့်မားသော Precision SK50 အဆုံးစက် Arbore ထိုကဲ့သို့သောမျက်နှာကိုကြိတ်ရှုးအဖြစ် radial drive ကို groove အတူရှုးများ၏ Clamp များတွင်အသုံးပြု high Precision SK50 အဆုံးစက် Arbore, ဒေါင်လိုက် disc ကိုရှုး, အ set ကို type ကိုအဆုံးကြိတ်, မြန်နှုန်းမြင့်နှင့်မြင့်မားသောတိစက် .Mechanical ဗိုင်းလိပ်တံနဲ့ tools တွေကိုဖြတ်တောက်...
JT / SK ကို / DAT အမြင့်မြန်နှုန်း Fine Balance Tool ကိုရှင် Precision JT / SK ကို / DAT ER Collet Chuck, tool ကိုအမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစား၏ကိုင်ဆောင်သူ, မြန်နှုန်းမြင့်နှင့်မြင့်မားသောတိစက် .Mechanical ဗိုင်းလိပ်တံနဲ့ tools တွေကိုဖြတ်တောက်နှင့်အခြား accessories.High Precision SK ကို Shanks Tool ကို Holder clamping...
SK ကို / DAT / JT ဘေးထွက် Lock ကိုအဆုံးစက် Arbore SK ကို / DAT / JT ဘေးထွက် Lock ကိုအဆုံးစက် Arbore, SK ကိုဘက်သော့ခတ်အဆုံးကြိတ်ကိုင်ဆောင်သူ, ဖြတ်တောက်ခြင်း tool ကိုတစ်ဦးအစိုင်အခဲမျက်နှာပြင်နှင့်အတူတစ်ဦး DIN1835-B က၏ကိုင်ဆောင်ထားသူမှလျှောက်ထား, မြန်နှုန်းမြင့်နှင့်မြင့်မားသောတိစက် .Mechanical ဗိုင်းလိပ်တံနဲ့ tools...
SK ကိုဘက်သော့ခတ်အဆုံးကြိတ် Arbore SLN Product Name SK 40 ER 32 Tool Holder Main
CNC ခုံစိတျအပိုငျး SK collets Chuck ကိုင်ဆောင်သူ Product Name SK 40 ER 32 Tool Holder Main
SK ကိုမြင့်မားသောအမြန်နှုန်း Fine မျှမျှတတ ER tool ကိုရှင် 1. ပစ္စည်း: 20CrMnTi 2. ခွန်အား: HRC48-52 3. အထဲက Run: 0.005mm 4. Precision Taper: <AT3 5. နျ Standard: DIN69871...
JT ER Collet Chuck CNC ခုံ Tool ကို Holder ရှေးခယျြများအတွက်မျှမျှတတ G6.3 သို့မဟုတ် G2.5 Precision SK ကို ER Collet Chuck, DIN6499 collet tool ကိုအမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစား၏ကိုင်ဆောင်သူ, မြန်နှုန်းမြင့်နှင့်မြင့်မားသောတိစက် .Mechanical ဗိုင်းလိပ်တံ clamping နှင့် tools များနှင့်အခြား accessories.High Precision SK ကို...
SK40-FMB22-100 shell ကိုအဆုံးကြိတ် Arbore အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် 1. အမြင့်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်မာကျောမှုကတိထားတော်; 2. Excellent ကချိန်ခွင်လျှာ, 3. အမြင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအား; 4. အမြင့်ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်မှု။ 5. Adapter ကိုစံ: SK ကို DIN69871;6Clamp အကွာအဝေး: 22 - 60 မီလီမီတာ။ လျှောက်လွှာ: ဤသည် SK ကို-FMB စီးရီး tool...
SK40-APU13-110L Intergrated keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck specification: 1. ပစ္စည်း: 20CrMnTi 2. ခိုင်မာသော: 56 ± 2HRC AT3 ထက်လျော့နည်း 3. taper သည်းခံစိတ် 4. ကာဗွန်နက်ရှိုင်း> 0.8 5. အမြင့်တိကျစွာ Shanks ဆက်သွယ်မှု အဆိုပါလုယက်ခြင်းနှင့် Chuck ၏ 6. ပေါင်းစည်းဒီဇိုင်းကိုယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်တည်ငြိမ်ရေး enchance,...
SK40-ER32 CNC BT Collets ရှင် SK ကို Shanks ER Tool ကို Holder SK40-ER32, DIN6499 collet သည် tool ကိုအမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစား၏ကိုင်ဆောင်သူ, မြန်နှုန်းမြင့်နှင့်မြင့်မားသောတိစက် .Mechanical ဗိုင်းလိပ်တံ clamping နှင့် tools တွေကိုဖြတ်တောက်နှင့်အခြား accessories.High Precision SK ကို Shanks Tool ကို Holder, မျှမျှတတ G6.3...
တရုတ်နိုင်ငံ SK ကို Tool ကိုရှင် DIN69871 ပေးသွင်း
DIN69871 DAT SK40 Tool ကိုရှင်
1. ဗိုင်းလိပ်တံ conicity စံ: DIN69871A
2. ဖြတ်တောက်ခြင်း tool ကိုဆုတ်ထားတာအတှကျအသုံးပွုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်အတူ ER collet နှင့်အတူသတ်မှတ်ထား ER collet Chuck, လေ့ကျင့်ခန်းနည်းနည်း, ဒါပေါ်မှာတုံးဆွဲနှင့်။
3. သုံးပြီးတဲ့အခါ, ခွံမာသီးကိုအဓိကကိုယ်တည်းထဲသို့သော့ခတ်ပြီးတော့ tools တွေကိုဖြတ်တောက်နှင့်အတူပထမ tensed ရောက်သည်ရပါမည်။
tools တွေဖြတ်တောက်၏ပျက်စီးမှုရှိစေခြင်းငှါ, မဟုတ်လျှင် 4. အမြဲတမ်းခြင်း, အကြံပြုလိမ်ဖဲ့ခြင်းသို့မဟုတ် Spanner ကိုအသုံးပြုပါ။
5. Spanner, လုံး Chuck ဆွဲထုတ်တစ်ဦးတည်းဝယ်ယူရမည်ဖြစ်သည်။
SK ကို Collet Chuck Holder
Intergrated လေ့ကျင့်ခန်း Chuck